Gabadha uu Guursan Rabo Boqor Harry-ga UK, Meghan Markle oo Twitter-ka ku darsatay Kane & Courtois, Shaki Maseyr oo taagan!!! "Sawirro"
Thursday, December 13th, 2018 - 11:32:15
Thursday January 11, 2018 - 12:21:51 in Wararka by Muuse Cabdi
MEGHAN MARKLE waa taageere kubadda cagta ah – balse waxay u muuqataa mid taageeri doonta Tottenham iyo Chelsea oo ay xiddigahooda ku darsatay barta Twitter.
Gabadha heshiiska Guurka ah kula jirta Prince Harry oo isagu ah Taageere weyn oo Arsenal ah, ayey Boqoraddiisu u muuqataa mid ka weecaneysa waddadiisa.
Meghan waxaa ka muuqata in ay niyadda Caashaqa ka jebineyso Boqorkeeda maaddaama Tottenham xiddiggeeda Harry Kane iyo Chelsea goolhayaheeda Thibaut Courtois ay ku darsatay Twitter.
England wiilkeeda Kane waa xiddigga ugu weyn ee liddiga ku ah Arsenal waxaana taageere u muujisay gabadha Mareykanka ah ee Meghan.
Belgian goolhayahooda Courtois waa laacib kale oo ay ku darsatay gabadha lagu soo darayo Boqortooyada England.
Labada laacib ee Premier League ayaa ku jira 3 ciyaartoy oo Atariishada caanka ah ay ku darsatay Gabadhan barteeda Twitter ka hor inta aan la xirin barteeda.
Wargeyska Sun qeybta Sport-ga ayaa la xiriirtay Guriga Boqortooyada Kensington Palace Shalay, waxayna weydiiyeen in ay ka warbixiyaan sababta ay Boqoradda cusub ku dooratay ku darsiga Baraheeda Bulshada xiddigaha Kane iyo Courtois.
Waxay keddib qaateen Go’aan ay ku xirayaan Qaanadaheeda Baraha Bulshada weliba si deg-deg ah, iyagoo ka warqaba in xiriir Guurkii kusii dhowaanaya uu ka dhexeeyo iyada iyo Prince Harry waxayna Lammaanuhu ku dhawaaqeen in ay is guursan doonaan bishii November.
Kane, waa rajada ugu weyn ee England World Cup xagaagan, wuxuuna ku jiraa 3 ciyaartoy oo Premier League ka dheela oo muteystay in Gabadhaan ay ku darsato.
Chelsea goolhayaheeda Courtois waxaa uu ku jiraa seddaxda, waxaana uga horreeyay Stoke difaaceeda Geoff Cameron.
Meghan ayaa xataa Warqad qoraal ah la wadaagtay Cameron iyadoo Baraha Bulshada kula hadleysa 4-sano ka hor waxayna taageereysay waqtigaas dalkeeda America oo ka mid ahaa xulalka ka qeyb gelayay koobkii Dunida ee Brazil.
Inta badan dadka ugu darsan Barteeda Twitter Gabadhan 36-jirka ah waa Saaxiibadeed, dadka caanka ah sida Jilaayaasha iyo Siyaasiyiinta.
Midkoodna Kane ama Courtois kuma jiro xiddigaha magaca weyn ee kubadda cagta ah ka sameeyay America, sidaas oo ay tahayna Meghan ayaa ku darsatay, taasoo la sheegayo in caddaaladda Jaceylkeeda guurka ku dhow ee Prince Harry in uu noqon karo mid Been ah.
Guurka Boqortooyo ee Gabadhan ee Harry, wuxuu dhacayaa May 19-keeda, wuxuuna noqon doonaa mid aad loola cajabo, iyadoo Spurs ama Chelsea ay ciyaarayaan waqtigaas FA Cup.
Qasriga Kensington Palace wax war ah kama uusan soo saarin cidda ay Meghan taageerto, waxayna ku gaabsadeen haddii ay tahay taageere, waxay taageereysaa ciddii ay jecleyd ciyaar ahaan.
Shalay ayey aheyd markii qoyska Farxaddu ay Booqdeen Xarun Raadiye oo ku taalla Brixton waxayna markii ugu horreysay wada mareen London iyagoo wada socda inta la xasuusto Taariikhda.